बलात्कारबाट बच्न यि किशोरीले बनाइन् यो अनौठो पेन्टी, बलात्कारी हुन्छन् हेरेको हेर्यौ ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बलात्कारबाट बच्न यि किशोरीले बनाइन् यो अनौठो पेन्टी, बलात्कारी हुन्छन् हेरेको हेर्यौ !
दिल्ली – भारतका उत्तर प्रदेशमा एक सामन्य परिवारकी एक यूवतीले यस्तो कोशिष गरेकी छिन कि, जसले उनलाई आशा छ कि विश्वभर केटीहरु बलात्कारबाट बच्न सक्छन् । सीनूले एक यस्तो पेटी बनाएकी छिन जसमा एक खालको लक लगाइएको हुनेछ, जसले महिलालाई बलात्कारबाट बचाउनेछ । सीनु यसलाई रेप प्रुप पेटी भन्छिन् । यो पेटी बनाउनका लागि बुलेट प्रुफ कपडा प्रयोग गरिएको छ । यसमा एक स्मार्ट लक, एक जीपीआरएस र एक रेकर्डर पनि लगाइएको छ । १९ बर्षका सीनु कुमारी उत्तर प्रदेशको फरुर्खावाद जिल्लाको एक निम्म मध्यबर्गीय परिवारकी छोरी हुन । उनका पिता किसान हुन् ।
सीनुको भनाई छ कि उनी केन्द्रीय बाल एवं विकास मन्त्री मेनका गान्धीबाट प्रशंसा मिल्यो । उनी अव यो पेटीको अधिकार सुरक्षित गर्दैछिन् । बीबीसीसँगको कुराकानीमा सीनुले भनेकी छिन कि पेटीलाई न त सजिलै काट्न सकिन्छ न त जलाउन नै । यसमा लगाइएको स्मार्ट लक केवल पासवर्ड हालेर मात्र खुलाउन सकिन्छ ।
सीनु भन्छिन कि यसमा एक बटन लगाइएको छ, जसलाई दवाएपछि तुरन्तै इमरजेन्सी या १०० नम्वरमा डायल हुन्छ । यसमा लागेको जीपीआरएसको मुद्धतबाट प्रहरीले लोकेशन पत्ता लगाउँछ । रेकर्डरले त्यस आसपासको सवै आवाज रेकर्ड गर्छ । यो पेटी बनाउन सीनुले चार हजार खर्च गरिन । परिवारले पुरै सहयोग गर्यो । सीनुले आफ्नै अनुसन्धानबाट यस्तो पेटी बनाएको बताएकी छिन् । सरकारी सहयोग मिले यो पेटीलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन सीनुको भनाई छ । टीभीमा दैनिक महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाले आफलाई चिन्तित पार्ने गरेको सीनुले बताइन् ।
श्रीमानले सौता ल्याएपछि भक्कानिएर रोएकि आमालाई साना छोराले आँशु पुछ्दै फकाएको निकै मार्मीक दृष्यले कसैकाे मन थामिएन (भिडियो सहित)